Ajụjụ - Quanzhou Stamgon Trading Co., Ltd.
Anyị ji nzuzo gị kpọrọ ihe
Anyị ji nzuzo gị kpọrọ ihe. Anyị anaghị ere, ịgbazite ma ọ bụ gbazite ozi ọ bụla amata ama (gụnyere adreesị ozi-e, akara ekwentị, wdg) gbasara ndị ahịa anyị na onye ọ bụla. Anyị agaghị eji ekwentị ma ọ bụ akwụkwọ ozi zitere gị. A ga-eji ozi ọ bụla ị nyere anyị mee ihe n'ụzọ ziri ezi, a na-ejikwa nlezianya yana nchekwa niile, a gaghị eji ya n'ụzọ ị nabataghị.
na-eji ngwungwu di mfe, a na-akwakpo ngwugwu ọ bụla na akpa rọba, ma ọ bụ bido 10 na akpa akpa, ma ọ bụ ahaziri ya.
Biko rụtụ aka na ngalaba "nha" na ngwaahịa ọ bụla maka nkọwa ndị ọzọ. Banyere eserese nha, biko gaa: eserese nha
You nabatara ọnọdụ OEM na ole opekempe maka ọnọdụ OEM?
Ee, a nabatara ọnọdụ OEM ma pere mpe nke ukwuu dabere na ihe ị nyere n'iwu. Biko zitere ihe osise doro anya nke ịchọrọ inye anyị iwu, anyị ga-edowe ha n'okpuru ndị nrụpụta anyị, ozugbo anyị nwere ihe ahụ, anyị nwere ike ịpụtara gị ngwaahịa oge. Ọ bụrụ na emebeghị, anyị ga-achọ ha maka gị, wee mepụta ngwaahịa. zipu ihe nlere ya na ihe ndi ozo i jiri uzo mbu nye gi ka inyocha.
Anyị na-eji akwa dị elu nke nwere ike ịgbatị ngwa ngwa maka uwe mmiri, yana 100% polyester maka mkpụmkpụ ụsọ osimiri, ma ọ bụ ahaziri ahaziri.
Banyere ọnụahịa na ịkwụ ụgwọ
Nwere ike izipu anyị ozi ma ọ bụ jụọ ase, gwa anyị ihe atụ nke ngwaahịa na-amasịghị gị na ọnụ ọgụgụ achọrọ, mgbe ahụ anyị ga-ezitere gị akụkọ ahụ.
Anyị na-enye ego maka ọnụọgụ dị iche iche, biko kpọtụrụ otu ịchọrọ.
Paymentkwụ ụgwọ na ozi nnabata akụ anyị.
Anyị na-anabata kaadị E Si Nweta, Nyefee Bank. Iji obere ma ọ bụ usoro nlele, anyị na-anabata ịkwụ ụgwọ n'ịntanetị ozugbo.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịkwụ m ụgwọ Bank, biko kpọtụrụ anyị.
Banyere oge ịkwụ ụgwọ
Anyị na-anabata ịkwụ ụgwọ ntanetị ozugbo site na kaadị kredit. A ga-akwụrịrị ụgwọ nziọnụ n'ime ụbọchị 3 nke ịtụ. Ọ bụrụ na enwere ihe kpatara igbu oge ịkwụ ụgwọ, biko buru ụzọ kpọtụrụ anyị. Daalụ.
Kedu ihe bụ opekempe ịtụ aro?
A: maka ụdị ngwaahịa anyị, MOQ ga-abụ pcs 10 ọ bụla n'ụdị / agba.
Ma maka ahaziri ahaziri iche, MOQ: mpempe 200 n'otu ụdị / agba.
Can nwere ike ịmere anyị ihe atụ?
A: Ee, mana ikwesiri ịkwụ ụgwọ maka ọnụahịa na ọnụahịa ya. Nwere ike zitere anyị ihe nlele zuru ezu nke ihe nlere ka anyị nwee ike lelee ọnụ ahịa na oge ịlele, mgbe anyị nwetasịrị ụgwọ gị, anyị ga-ahazi usoro nlele gị ozugbo.
Can nwere ike itinye akara nke aka anyị na ngwaahịa?
A: Ee. Anyị na-enye ọrụ nke ịgbakwunye akara ndị ahịa, biko ziga art art art na PDF ma ọ bụ usoro AI.
Etu ebugharị ụgbọ?
Anyị ga-ebugharị site na ngwungwu nkwupute mba ụwa EMS / DHL / UPS / TNT, ma ọ bụ anyị ga-ebupu mmiri site n'oké osimiri ma ọ bụrụ na mkpụrụ nke nyere karịrị 1cbm, nke ahụ dabere na nha.
Daysbọchị ole ka ọ na-ewe?
Na izugbe ọ na-ewe ụbọchị 3-4 ọrụ ruo ụwa niile site na UPS, yana ụbọchị 5-7 na-arụ ọrụ site na EMS (belụsọ Russia), na ụbọchị 4-5 na-arụ ọrụ site na TNT / DHL dabere na mpaghara ebe i bi.
Banyere oge nnyefe
You kwadebe ịkwado ịtụ iwu, anyị ga-ebu ụzọ lelee iwu gị wee zitere gị akwụkwọ ọnụahịa ahụ n'ime awa iri abụọ na anọ. Maka maka ngwaahịa echekwara, anyị ga-ebuga n'ime ụbọchị 7, ma ọ bụghị, anyị ga-akwado gị oge nnabata.
Gwa m ọnụ ahịa mbupu tupu ịtụ ya
Ọnụ ego mbufe na-adabere na ibu, oke na ụzọ nnweta (EMS, DHL, TNT, UPS, ma ọ bụ njem ụgbọ mmiri) na obodo ị na-aga. Yabụ na ọ na-esiri anyị ike ikwuwa ụgwọ maka mbufe ego tupu itinye iwu ( Ibe dị okirikiri nke bikini ibe bụ ihe dị ka 0.2kg, mana ịdị arọ olu ahụ bụ ihe dịka 0kkg / pc). You nwere ike ịhọrọ ụlọ ọrụ ụgbọ mmiri na-amasị gị, anyị ga-enyochakwa ihe ngosi awara awara ma tụọ ụzọ kacha mma maka gị.
Banyere nloghachi & usoro
Anyị na-agbakwunye ịdị mkpa maka ngwaahịa na ọrụ dị mkpa, yabụ tupu izipu ngwugwu ahụ, anyị ga-enyocha ngwaahịa ahụ ugboro abụọ yana ịkwakọ onwe anyị.
Etu aga - esi elebara ya anya, Ọ bụrụ na ihe ahụ nwere ntụpọ?
Ọ dị nwute na ihe ahụ nwere ntụpọ, anyị ga-ejikwakwa ike ihe ndị a. Anyị chọkwara enyemaka gị.
Nke mbu: Ọ bụrụ na ihe ahụ nwere ntụpọ, biko mee ka anyị mata n’ime ụbọchị atọ ebugare gị.
Nke abụọ: biko gbaa foto nke ihe ahụ nwere nkwarụ, wee zitere anyị foto a foto site na email, ka m nwee ike nyefere ha Onye isi Nchịkwa Anyị, mgbe ọ lelechara ma kwenye, anyị ga-agbakwunye ndị ọhụrụ na usoro nke ọzọ maka n'efu.
Weghachite ma ọ bụ kagbuo iwu
Iji nye ndị ahịa ahịa ọrụ adaba, anyị na-anabata nlọghachi ma nyefee kagbuo n'ime 24hours.
Nke kachasị, ekele maka itinye ịtụ na weebụsaịtị anyị www.stamgon.com . Afọ ojuju ga - abụ ihe kacha agba anyị ume.
Anyị debere peeji nke ahụ iji mee ka ị chọta kwekọrọ n'ụzọ ụlọ ọrụ na-esochi usoro ọsọ ọsọ ma nwee olileanya na ọ ga - enyere gị aka mezue nyocha nsonye.
Ọ pụtara na anyị ebugharịla usoro gị mgbe ị na-anata nọmba nsuso. Nwere ike ịlele ọkwa nke ngwugwu gị na peeji nke . Ajụjụ ọ bụla, biko kpọtụrụ anyị n'efu!
PS: Oge ụfọdụ gosipụta igbu oge na nwelite ozi na weebụsaịtị ha. Yabụ biko nwee ndidi ma lelee ya mgbe oge ụfọdụ gasịrị. Nghọta gị ga-enwe ekele dị ukwuu, daalụ!